China ifektri kanye nabaphakeli | Yiruihe
I-Lady Colourful Open Toe Sheepskin Slipper
Idizayini evulekile yezinzwane ingasiza uzwane lwakho ukuba luzizwe lukhululekile “Free” kepha i-vamp yesikhumba semvu isengenza unyawo lwakho lufudumele futhi lukhululeke. Irabha kuphela elizovimbela ukushelela ukuvikela isisefo sakho.
Ngabe kunjani ukuba neziliphu zasekhaya ezifudumele, ezithambile futhi eziphefumulayo? okushelelayo kwale ntokazi enemibala evulekile kuzokunika impendulo.
Lezi slippers zesikhumba semvu ezimibalabala ezimibalabala, zombili ezingaphezulu nezingaphakathi, zenziwa zibe phezulu kakhulu kwesikhumba semvu ese-Australia.
Ziyini izinzuzo zama-slippers esikhumba semvu? Cabanga nje, uma ukhathele ngemuva komsebenzi wosuku, noma ngemuva kohambo nabangane, ukuba nezibhobo ezinjalo zesikhumba semvu ezithambile nezikahle ngeke nje kukunikeze injabulo yokuphumula ngokweqile, kodwa futhi kuzokunika umuzwa omuhle wokuphakama lapho ubuyela ezintweni zemvelo. lokhu akuyona kuphela izinyawo zokuphumula, kepha futhi kuyikhwalithi yempilo ongayijabulela.
Futhi isiliphu sesikhumba semvu asiphathi izingubo zokuya ocansini ngamahlaya, noma sigqoka isiliphu sesikhumba semvu ukungena nokuphuma, namanje asikuphuli ukuvelela.
Izinto zemvelo zinezinzuzo ezingenakuqhathaniswa uma ziqhathaniswa nezinto zokwenziwa. Zihle kakhulu ekuvimbeleni ukuzalaniswa kwamagciwane nokunikeza ukunakekelwa okunempilo kumalungu omndeni.
Okuwukuphela kwalo kwenziwa ngenjoloba, okungasheleli, okuvikela futhi okukhanyayo, okukunikeza umuzwa wokuphepha kuzo zonke izinhlangothi.
Isikhumba semvu saziwa ngokulondolozwa kokushisa, ikakhulukazi isikhumba semvu sase-Australia, esigcina izinyawo zakho zifudumele ebusika obubandayo. Ngaphezu kwalokho, isikhumba semvu sinokungena okuhle komoya, okungeke kugxishe noma ngabe kugqokwa isikhathi eside. ngisho nasehlobo elishisayo ngeke futhi izinga lokushisa liphakeme kakhulu, ngoba lesi sishibilika semvu futhi siyisiliphu esithandwayo segumbi lomoya opholile ehlobo.
Into ebaluleke kakhulu ukuthi ufanelwe okungcono kakhulu, izigaxa zezikhumba zezimvu ezikunikeza isipiliyoni sokuphila okunethezeka.
Langaphambilini ILady Colourful Close Toe Sheepskin Slipper
Olandelayo: I-Lady Cross Vamp Sheepskin Slipper
Okugcwele Okusanhlamvu Cow Isikhumba Abesilisa Slipper nge EVA ematheni
ILady Cuff Indlu Yezimvu Yesikhumba